Rohingya Students Forum: May 2016
သူကတော့ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုဝင်ဟတ်ပြီး “မင်းတို့လုံခြုံရေးက အလကားပဲ”လို့ဝင်ရေးခဲ့တဲ့သူပါ။ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂လောက်တုန်းက အမေရိကန်စစ်တမ်နဲ့နာဆာရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို လန်ဒန်ကနေဝင်ဟတ်ပြီးဖိုင်တွေကိုဖျက်ကာ ပတ်စဝေါ့ဒ်တွေ ချိန်းခဲ့ပါတယ်။ 2002ခုနှစ်မှာပဲ အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ ဗြိတိန်ထောင်ထဲရောက်နေပါတယ်။ အရမ်းကျွမ်းကျင်ပေမယ့် အရမ်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဟတ်ကာ တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အမေရိကန်က သူ့ကိုအခုအချိန်ထိလိုချင်နေပါတယ်။
Kevinကောတ့ အခုလောလောဆယ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်နေပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွရဲ့ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၅တုန်းက တရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့လို့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ နူးကလီးယားဒုံးကျည်တွေကို သူတစ်ချက်လေချွန်ရုံနဲ့ ထ်ိန်းချုပ်လို့ရတယ်လို့လည်းဆိုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်လို့ရမရတော့ မသိပေမယ့် ထောင်၅နှစ်ကျခံခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ထပ် ဟတ်ကာတစ်ယောက်ကတော့နာမည်ကြီးတွေရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံတွေကိုဖော်ထုတ်နေတဲ့ ဝီကီလိခ်ရဲ့ဟတ်ကာ Jacobပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာငယ်စဉ်က မိဘအရင်းတွေရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆေးစွဲနေတဲ့ဖခင်နဲ့ ပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆိုးရွားလှတဲ့ကလေးအတွ့အကြုံကသူ့ကိုကွန်ပျူတာနယ်ပယ်ထဲတွန်းပို့ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအများက အန္တာရယ်အရှိဆုံး ဟတ်ကာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ LulzSecလို့ခေါ်တဲ့ ဟတ်ကာအဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Sony Playstationကိုဟတ်တဲ့အမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ လူပေါင်း ၇၇သန်းရဲ့အချက်အလက်တွေကိုခိုးယူခဲ့ပေမယ့် အလွယ်တကူခိုးယူလို့ရကြောင်းပဲ ပြချင်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်တော့ မကျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်တော့ကျခံခဲ့ပါတယ်။
သူကတော့ ဟတ်ကာတွေထဲမှာတော်တော်ကိုစောတဲ့အထဲက ဟတ်ကာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ‘Morris Worm”လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတီထွင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကွန်ပျူတာပေါင်း ၆၀၀၀လောက်ကိုထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူက အင်တာနက်အရွယ်အစားကိုတိုင်းတာချင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် သူ့ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အလိုလျောက်အသစ်တွေထပ်မွေးတဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာပေါင်းများစွာကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူကတော့ ပြစ်ဒဏ်မကြီးမားပဲ စောင့်ကြည့်ခြင်းပဲခံခဲ့ရပါတယ်။
Posted by Rohang king at 10:42 AM
နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ နစ်နာမှုတွေ၊ အကြံပြုချက်တွေ၊ အသနားခံစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတကို တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာသစ်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။
အဲဒီလို တိုင်ကြားဆက်သွယ်ရာမှာ မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အပြည့်အစုံကို ဖော်ပြရမျာဖြစ်ပြီး အခြားဓာတ်ပုံနဲ့ ဖိုင်တွေကိုလည်း တွဲပြီး တင်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီhttp://www.mpoofficemail.com ကို ၀င်ရောက်တိုင်ကြားရာမှာ ဖိုင်တွေကို ၂ မီဂ္ဂါဘိုက်အထိ တွဲပြီးတင်ပြနိုင်ပါတယ်။
Posted by Rohang king at 10:25 AM
ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင်ခရိုင် ၀င်ပါပေါက် မြို့ နယ်အတွင်းမှ အလယ်တန်းကျောင်းသူများ နေထိုင်နေသည့် အမျိုးသမီးဘော် ဒါကျောင်းဆောင် မနေ့ ည (၁၁ )နာရီမှ စတင်မီးလောင်ခဲ့ကျောင်းသိရ ပါတယ်။
ကျောင်းသူငါးဦးမီးလောင်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးရုံမှာ အတွင်းလူနာအဖြစ်ကုသနေရပြီး နှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ကျောင်း တာဝန်ရှိသူတွေက ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယခုမီးလောင်တဲ့ ကျောင်သူတွေနေထိုင်နေတဲ့ ဘော်ဒါဆောင်မှာ စုစုပေါင်း (၃၈)ဦး နေထိုင်နေကြပါတယ်၊ အဆောက်အသီး တခုလုံး မီးထဲပါသွားခဲ့ပါတယ်။
မီးလောင်နေချိန် မှာကျောင်းသူလေးတွေ အိပ်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
မီးလောင်ရတဲ့ အကြောင်းအရာကို ယနေ့ မနက်ပိုင်း မြို့ နယ်အာဏာပိုင်တွေက စစ်ဆေးနေကြကြောင်းသိရပါတယ်။
မြန်မာရှေးဘုရင်မင်းဆက်များ (ဗဟုသုတအနေနဲ့မှတ်သားသိမ်းဆည်းဖို့ )
Posted by Rohang king at 12:21 PM
မျိူးပျက် ဘက်တီးရီးယာ အသင်း (မဘသ) သည် ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းနေထိုင်လာခဲ့ကြ သည့် မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ပျက်စီးစေရန် အလို့ငှာ အမျိုးသားရေးခေါင်းစဉ်အောက်၌ ရိုးသားသော မျိုးချစ်ပြည်သူများကို အသုံးချ၍ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ဘာသာခြား မုန်းတီးရေး ဆန္ဒပြပွဲများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများဆက်တိုက် ပြုလုပ်လာခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ငြိမ်မှု ပျက်စီးသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် လက်တွဲလာနေသည့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားကို စိပ်ခြမ်းနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သင်္ဃန်းကို ဝတ်ထားသော်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမတော်များကို လူသိရှင်ကြား ငြင်းပယ်နေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ မိမိအမျိုး၊ မိမိဘာသာ၏ အကျိူစီးပွားကို ပျက်နေခြင်းဖြစ်သည် မဟုတ်လော့။ ထို့အပြင် သူတစ်ပါး၏ အခွင့်အရေးများ နစ်နာဆုံးရှူံးစေရန် ဟောပြောခြင်း၊ လမ်းပေါ်ထွက် အော်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်း စသည့် လုပ်ဆောင်မှုများသည်လည်း သူတစ်ပါး စီးပွားကို ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည် မဟုတ်လော့။
ထိုကဲ့သို့ မိမိအကျိုး၊ သူ့တစ်ပါးအကျိုးကို မသိတတ်သော သူကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက-
“သူ့စီးပွား၊ မိမိစီးပွားကို မသိသောသူဟာ မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးချို့သည်မည်၏။
မိမိစီးပွားကိုသာ သိ၍ သူ့စီးပွားကို မသိသသူကား မျက်စိတစ်ဖက် ချို့သည် မည်၏။ နှစ်ပါးစုံကို သိသသူကား မျက်စိနှစ်ဖက်ရှိသည်မည်၏။
ဤသို့နှစ်ဖက်ရှိသောသူကား လူလည်း အိမ်ထောင်အမှု၌ လုံ့လ အထအကြွရှိသော အကျင့်၊ ပဉ္စသီ ဆောက်တည်သောအကျင့်၊ ဥပုသ် ဆောက်တည်သော အကျင့်၊ ဤသို့အကျင့်အစရှိသော ဆိုခဲ့ပြီးသောကုသိုလ် ဆယ်ပါးတရားကို ကျင့်လျက် အသက်မွေးသည်လျှင် ပညာဖြင့် အသက်မွေးသည် မည်သတည်း။" ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။
(ပေလေးပင် ရှင်လေးပါး အပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ကျော် ရှင်မဟာသီလဝံသ ရေးသော “ပေါရာယနဝတ္တု")
ဆိုလိုသည်မှာ မျက်စိနှစ်ဖက်ချို့နေသူ၌ အိမ်ထောင်အမှု၌ လုံ့လ အထအကြွရှိသော အကျင့်၊ ပဉ္စသီ ဆောက် တည်သောအကျင့်၊ ဥပုသ် ဆောက်တည်သော အကျင့် အစရှိသော အကျင့်တို့သည် မည်သည့်အခါမှ ရှိနိုင် မည်မဟုတ်ဟု မြတ်စွာဘုရားက ဆုံးမညွှန်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။
စတုရင်္ဂဗလ အမတ်ကြီးရေးသားခဲ့သည့် လောကနီတိကျမ်းမှ သူယုတ်နှင့် လက်တွဲသူသည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်မည်ကိုလည်း ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
“အကြင်သူသည် သူတော်မဟုတ်သောသူအား ချစ်အပ်သည်ဖြစ်၏။ သူတော်ကောင်းကို ချစ်ခြင်းကိုမပြု။ မသူတော်တို့၏ တရားကိုလျှင် နှစ်သက်၏။ ထိုသူ၏ ထိုအမူအကျင့်သည် ပျက်စီးအပ်သည်၏ အကြောင်း တည်း။"
(လောကနီတိ၊ အပိုဒ် ၆၇)
The person loves the person who is not virtuous and does not love the virtuous person, and pleased with the teaching of the vicious people. That person's action is the cause of his ruin.
ထို့ကြောင့် ဘာသာတရားအား ဂုဏ်နိမ့်နေသော သူယုတ်မာတို့၏ ဗန်းပြ လုံ့ဆော်မှုကို အသိတရားမဲ့သည့် အသွင် နာခံလျက် ရေလာမြောင်းပေး ကျင့်ကြံလျင် မိမိတို့၏ လောကီ လောကကုတ္တရာ နှစ်ဘဝ နှစ်မြှပ် ပျက် စီးသွားမည်မှာ သံသယရှိပါသလား။
မဆင်မခြင် မလေ့လာဘဲ သူယုတ်မျက်ကန်းတို့၏ နောက်လိုက်မှုသည် လူမျိုး၊ တိုင်းပြည်၊ သာသနာ သာမက မိမိကိုယ်ကိုယ်ပါ ပျက်စီခြင်းသို့ တွန်းပို့နေခြင်းရောက်၏။
အယူမှား၊ အမြင်မှား၊ အတွေးမှားတို့ကို ဆင်ခြင်၍ တရားနှင့်လျော်စွာ အမှန်တရားကို ချဉ်းကပ်နိုင်ပါစေ။
မကြာခဏမ ဆင်မခြင် ဆန္ဒပြနေသူတွေကို ရည်စူးလျက်-
Posted by Rohang king at 12:30 PM